Akwụkwọ mbufe dijitalụ & Onye na-ebufe ọkụ Flex |Alizarin
Ahụmahụ ụlọ ọrụ 17 afọ
10000㎡ Mpaghara ụlọ ọrụ
20000 Square mita mmepụta kwa afọ
Ụgwọ nke ụlọ ọrụ Fuzhou Alizarin Co., Ltd.
Fuzhou Alizarin mkpuchi co., Ltd, tọrọ ntọala na 2004, bụ ihe ọhụrụ emeputa nke inkjet & agba laser nnabata mkpuchi na inkjet ink maka inkjet, agba laser plotter & ọnwụ plotter.Azụmahịa anyị bụ isi na-elekwasị anya na mmepụta nke akwụkwọ ngosi dị elu, mkpuchi mkpuchi na ihe nkiri n'ọtụtụ dị iche iche, sitere na mgbasa ozi inkjet, mgbasa ozi Eco-solvent inkjet, mgbasa ozi inkjet siri ike dị nro, mgbasa ozi inkjet na-eguzogide mmiri na akwụkwọ mbufe inkjet, agba. akwụkwọ mbufe laser, Eco-solvent Printable Flex na Cut table Polyurethane Flex wdg. Ma anyị nwere ọtụtụ nka…
Ihe ịrịba ama & Awards
Fuzhou Alizarin Coating Co., Ltd. e hiwere.N'otu afọ ahụ, ewepụtara akwụkwọ mbufe inkjet, nke bụ ụlọ ọrụ mbụ na China iji kwalite ngwa ya nke ọma.
Eco-Solvent PU flex ebipụta batara n'ahịa.
A na-ewebata akwụkwọ mbufe laser agba n'ahịa n'otu oge.
The top-ọkwa cuttable PU ihe nkiri usoro ngwaahịa na-akwalite n'ụlọ na ná mba ọzọ.
Ịzụta ihe karịrị 10,000 mita nke ụlọ ọrụ mmepụta ihe
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe kwagara na ụlọ ọrụ ọhụrụ, nke karịrị ugboro 6 karịa nke mbụ.
A na-ewebata ngwaahịa usoro PU flex cuttable n'ahịa mba ofesi.
Ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke Fuzhou Alizarin mkpuchi Co., Ltd meriri aha Fujian High-tech Enterprise
Anyị na-enye PrettySticker HTS-300SRF Printable reflective PU Flex maka uwe ọrụ mara mma, ị nwere ike ịbawanye visibiliti na akwa pigmenti na-egosipụta maka uwe ọrụ gị n'okpuru ọkụ.
Ndị na-ebi akwụkwọ: Ndị na-ebi akwụkwọ inkjet Eco-Solvent / HP Latex inkjet na-ebi akwụkwọ / UV inkjet na-ebi akwụkwọ
Cutter: ụdị ọ bụla nke ịcha vinyl
Igwe ọkụ ọkụ: 150~165°C na 15~25sec
Fabric: 100% owu, owu na ngwakọta polyester, 100% owu akwa akwa, Artificial akpụkpọ anụ wdg.
HTGD-300 bụ foto-chromic ihe na-egbuke egbuke na ntọala gbara ọchịchịrị na mpempe akwụkwọ 170 micron nke enwere ike ịse crayons wax, pastels mmanụ, akara fluorescent, pensụl agba, na ndị na-ebi akwụkwọ ink jet nkịtị.
Enwere ike ibipụta Eco-Solvent Metallic PU Flex site n'ụdị niile nke Eco-Solvent inkjet na-ebi akwụkwọ, nweta ogologo ogologo oge na agba na-ejigide onyonyo, ịsacha mgbe emechara.
Eco-Solvent Printable Vinyl (HTV-300S) sitere na ihe nkiri polyvinyl chloride nke emepụtara dị ka ọkọlọtọ EN17 nwere nrapado na-ekpo ọkụ na ahịrị ihe nkiri polyester, ọmarịcha ịkpụ na ahịhịa ahịhịa.
2021 ReChina Asia Expo, Mee 19-21, Shanghai
A na-eme ihe ngosi ReChina kwa afọ na Shanghai kemgbe 2004. Dị ka otu n'ime ihe omume kachasị mkpa maka ndị na-ebi akwụkwọ na ndị na-eri ihe, ReChina Expo kwadoro nke ọma site na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ maka ...
DPES bịanyere aka na Expo China 2021
2021 DPES Guangzhou International Mgbasa Ozi Ngosi, DPES Sign Expo China 2021 Ụlọ ihe ngosi: Poly World Trade Center Expo, Guangzhou Poly World Trade Center Expo Adreesị: Poly World Trade ...
Ihe ngosi Ọmụmụ Okwu Anyị
Vidiyo akụkọ na ihe omume
2022 DPES banye Expo China (Guangzhou) 002